Odisha | Wildlife Tours | Explore the Flora and Fauna - 993.702.7574
Odisha miaraka amin'ny Sandpebbles - sarimihetsika mahatalanjona miaraka amin'ny natiora, Flaura sy Fauna ao Odisha.
Mitady fialam-boly tena izy? Ny fitsangatsanganana any an'ala Wildlife Odisha no tanjonao farany hitsangantsanganana!
Na dia maka ny trano fonenana ho an'ny lazany aza ireo tora-pasika sy tempoly dia mahagaga ny niainana ny Wildlife Tours Odisha. Miaraka amin'ny andian-jiolahim-pirenena, tahirin-tigra, ary toeram-ponenan'ny biby an-tanety, ny fanjakana dia maneso ny karazana fauna sy ny zavamaniry izay tsy hahita na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Tahaka ny ala honko sy ny tanin'ny Bhitarkanika na ny alan'i Chandaka, ny manodidina sy ny faritra rehetra any amin'ny faritra atsinanan'i Inde dia mirakitra ny biby miaina any an'ala.
Eo amin'ny toeram-ponenanao any Odisha , Mahita fahafinaretana ianao mahita ireo biby mandehandeha any amin'ny toerana tsy fantatrao, mihaino ny feony ary mahatsiaro ny fientanam-pitiavanao vokatry ny fientanam-po. Eto ianao dia afaka manatri-maso ireo karazan-javamaniry maro samihafa ahitana tigra, elefanta, voay, serfa, aloka, ary maro hafa ao amin'ny toeram-ponenany voajanahary.
Ny fandefasana ny Wildlife Odisha dia mifanaraka amin'ny tombontsoanareo ary manolotra fahafahana hahita ny tsara indrindra amin'ny biby an-tsitrapo izay azon'ny firenena atolotra.
DAY 01: Tonga ny Bhubaneswar
Tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina / biraon'ny Bhubaneswar ary nafindra tany amin'ny hotely. Nitsidika ny tempolin'i Lingaraj, Khandagiri Udayagiri Jain Caves. Ny takariva maimaim-poana any Ekamra Haat Dinner ary mihoatra ny alina ao Bhubaneswar.
Rehefa avy nitsidika an'i Satkosia tamin'ny sakafo maraina i Angul. Raiso ny sambo amin'ny sambo Satkosia izay ahafahanao mahita marobe Mugger sy Gharial eny amin'ny fasan'ny fasika. Fivoriambe manaraka ny lalan'ny natiora. Mandritra ny alina sy ny mamatonalina ao Satkosia.
Aorian'ny fitsidihana sakafo maraina Bhitarkanika. Andraikitsika mankany amin'ny toeram-ponenantsika. Manaraka ny sakafo kanto any an-tranon'izy ireo any Kalibhanja Diha amin'ny sambo avy any ambanivohitra izay ankasitrahan'ny Departemantan'ny Wildlife, mba hankafiziny ny toerana misy an'i Ramsar. Ny hariva hitsidika ny Tempolin'i Jagannath handray anjara amin'ny Live Aalati Darshan. Ny hariva dia mankafy ny afo miaraka amin'ny Snacks sy Dinner. Feno alina amin'ny fasika Sandal Jungle Resorts.
Taorian'ny sakafo matsiro trano tsara tarehy, mitsidiha ny fitoerana Masina an'Andriamatoa, mankany amin'ny tilikambo fitrandrahana ny King Antitra, mandeha sambo mankany amin'ny lakandrano samihafa any amin'ny sambon-tanety ankatoavin'ny Departemantan'ny Wildlife, mba hahitana ny voay. Taorian'ny fitsidihana an-tsokosoko tany amin'ny tranombakoka sy ny faritra. Amin'ny hariva dia mankafy ny afo ao an-toby miaraka amin'ny Snacks sy Dinner. Overnight at Sand Pebbles Jungle Resorts.
Taorian'ny fitsidihan-tsakafo sakafo matsiro tsara tao amin'ny Similipal Tiger Reserve. Hiditra ao an-hotely. Rehefa avy nandehandeha ny natiora ary ny fianarana momba ny natiora tany an-tanimbary, dia tsidiho ny fambolena fambolena. Mandritra ny alina sy ny alina ao Similipal.
DAY 07: Similipal - fialan-tsasatra
Taorian 'ny fialan-tsasatry ny misakafo maraina